Microsoft Teams တွင် အစည်းအဝေးတစ်ခု သတ်မှတ်ရန် အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်
Microsoft Teams အက်ပ်တွင်သင်ပထမဆုံးလုပ်ချင်သည့်အရာမှာအစည်းအဝေးတစ်ခုဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဒီသင်ခန်းစာမှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာအတိအကျသင်ပြတော့မယ်။
အဆင့် 1. Microsoft Teams အပလီကေးရှင်းကို Desktop/Laptop တွင်ဖွင့်ပါ။
အဆင့် 2။ 'ကိုနှိပ်ပါပြက္ခဒိန်ပင်မစာမျက်နှာပေါ်တွင် '' ခလုတ်ကို။
အဆင့် 3. ပြက္ခဒိန်စာမျက်နှာတွင် 'ကိုနှိပ်ပါ၊အစည်းအဝေးအသစ်'ခလုတ်ကို။
အဆင့် 4. အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်သည့် သက်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အစည်းအဝေးစာမျက်နှာအသစ်တွင် ပေးထားသည့်ပုံစံတွင် ထည့်သွင်းပါ။ အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုသည် အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးအမည်၊ အစည်းအဝေးတည်နေရာကို ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြချက်တစ်ခုသည် အစည်းအဝေးအတွက် အကြောင်းအရာကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီး တက်ရောက်သူများသည် အစည်းအဝေးမ၀င်မီ ၎င်းကို ဖတ်နိုင်သည်။
ဘတ် Google Earth ပေါ်ရှိ လတ္တီတွဒ်နှင့် လောင်ဂျီတွဒ်တို့ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် တည်နေရာကို မည်သို့ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း။
အဆင့် 5။ 'ကိုနှိပ်ပါကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်သင်အစည်းအဝေးအတွက်အသေးစိတ်သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် 6. ဤအစည်းအဝေးသို့ လင့်ခ်ကို ကူးယူပြီး ၎င်းကို အလိုရှိသော အဆက်အသွယ်များနှင့် မျှဝေနိုင်သည့် ဝင်းဒိုးတစ်ခုကို ယခု မြင်တွေ့ရပါမည်။
ဤ link ကိုလက်ခံရရှိသူများသည်၎င်းအားနှိပ်ရုံသာလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ Microsoft Teams app ကိုသူတို့၏စက်ပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားလျှင်၎င်းသည်ဖိတ်ကြားခြင်းကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်တိုးတက်နေပါကအစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်နိုင်သည့်နေရာတွင်ပင်သူတို့ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းလိမ့်မည်။ ။
လွန်ခဲ့သော Telegram Messenger ကို ဘယ်သူ စတင်ခဲ့တာလဲ သိလား။ သိရှိရန် ဆက်ဖတ်ပါ။
နောက်တစ်ခု AMD နှင့် MediaTek တို့သည် AMD RZ600 Series Wi-Fi 6E Modules ကို ပွဲဦးထွက်ပြသခဲ့သည်။